ဂျိုက်သိုးဆိုတာ ဘာလဲ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ဝက်သက်၊ ဂျိုက်သိုး၊ ရေကျောက်ဆိုတာတွေဟာ ကလေးရှိတဲ့ မေမေတို့တိုင်းအတွက် စိတ်ညစ်စရာရောဂါတွေပါပဲနော်။ ဒါတင်မကသေးဘူး။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေတွေအတွက်လည်း ဂျိုက်သိုးဆိုတာ အိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုပါပဲ။ ဒီတော့ ဒီဆောင်းပါးလေးမှာ မေမေတို့ မသိမဖြစ် သိသင့်တဲ့ ဂျိုက်သိုးရောဂါအကြောင်းလေး ဆွေးနွေးပေးထားပါတယ်။
ဂျိုက်သိုးဆိုတာ ကလေးတွေမှာ အဖြစ်များတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုး အပျော့စားတစ်မျိုးပါ။ ဖြစ်ပြီဆိုရင် ကလေးမှာ အဖျားလေး တငွေ့ငွေ့ ၃၈°C လောက် ဖျားလေ့ရှိတယ်။
ဂျိုက်သိုးရဲ့ တခြားလက္ခဏာတွေကတော့ အနီရောင် အစက်အစက်တွေ ပေါ်လာတာ၊ အကျိတ်တွေ ရောင်လာတာ၊ အအေးမိသလို ငွေ့ငွေ့လေးဖျား၊ ခေါင်းကိုက်ပြီး နှာရည် တောက်တောက်ကျတာတွေ ဖြစ်တတ်တယ်။
ဂျိုက်သိုး ကူးစက်ခံရချိန်ကနေ ရောဂါလက္ခဏာပေါ်ချိန်ထိဟာ ၂ ပတ်ကနေ ၃ ပတ်လောက်ထိ ရှိတတ်ပြီး အနီကွက်တွေမပေါ်ခင် ၁ ပတ်လောက်ကနေ ပျောက်သွားပြီး အနည်းဆုံး ၄ ရက်လောက်အတွင်းမှာ ကိုယ့်ဆီကနေ သူများကို ကူးစက်နိုင်တယ်။
အကောင်းဆုံးကတော့ ကလေးတွေကို ကာကွယ်ဆေး ထိုးပေးထားလိုက်ပေါ့။
>> ဘာကြောင့်များ ဂျိုက်သိုး ဖြစ်ရပါလိမ့်?
အချင်းချင်း ထိတွေ့ရာ၊ နှာချေချောင်းဆိုးရာကနေ ကူးစက်တတ်တဲ့ ဂျိုက်သိုးဗိုင်းရပ်စ် rubella virus ကြောင့် ဖြစ်တတ်တယ်။ တစ်ခါပေါက်ဖူးရင် တစ်သက်တာ ခုခံအား ရရှိသွားပါလိမ့်မယ်။
ဂျိုက်သိုး မဖြစ်ရအောင် ကျန်းမာရေးဌာနက ထိုးပေးတဲ့ ဝက်သက်၊ ဂျိုက်သိုး၊ ပါးချိတ်ရောင် ကာကွယ်ဆေး ထိုးပေးသင့်တယ်နော်။
အရင်က ဂျိုက်သိုး မဖြစ်ဖူး၊ ဂျိုက်သိုးကာကွယ်ဆေး မထိုးဖူးသူ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တစ်ယောက်မှာ ဂျိုက်သိုးပိုး ကူးစက်ခံရခဲ့ရင် ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာ မမွေးရသေးတဲ့ ဗိုက်ထဲက ကလေးဆီကိုပါ ကူးစက်ပျံ့နိုင်တယ်။
ဒီလိုကူးစက်သွားတဲ့အခါ ကလေးရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ဖျက်ဆီးပြီးတော့ ကလေးမှာ မွေးရာပါ ဂျိုက်သိုးရောဂါစုလို့ခေါ်တဲ့ မွေးရာပါချို့ယွင်းချက် အများအပြား ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဒီလို ကလေးကို ကူးစက်နိုင်ခြေနဲ့ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ မွေးရာပါချို့ယွင်းချက်တွေဟာ ကူးစက်ခံရချိန် အမေ့ရဲ့ ကိုယ်ဝန်အနုအရင့်ပေါ် မူတည်နေတယ်။ ကိုယ်ဝန်နုလေလေ ပိုဆိုးလေလေပါပဲ။
မွေးရာပါ ချို့ယွင်းချက်လို့ဆိုရာမှာ အကြားအာရုံနဲ့ အမြင်အာရုံ ချို့ယွင်းချက်တွေ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှု နှောင့်နှေးတာတွေနဲ့ တခြားပြဿနာတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။
မိခင်မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ ပထမ ၁၀ ပတ်အတွင်း ဂျိုက်သိုး ကူးစက်ခံရရင် ဗိုက်ထဲက ကလေး ၁၀ ယောက်မှာ ၉ ယောက်လောက်မှာ မွေးရာပါ ဂျိုက်သိုးရောဂါစုဖြစ်ပြီး မွေးရာပါ ချို့ယွင်းချက်လေးတွေ ပါလာတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်အပတ် ၂၀ နောက်ပိုင်းမှာကူးရင်တော့ မွေးရာပါ ဂျိုက်သိုးရောဂါစု ဖြစ်နိုင်ခြေ မရှိသလောက်ကို နည်းသွားပါပြီ။
ဝကျသကျ၊ ဂြိုကျသိုး၊ ရကြေောကျဆိုတာတှဟော ကလေးရှိတဲ့ မမေတေို့တိုငျးအတှကျ စိတျညဈစရာရောဂါတှပေါပဲနျော။ ဒါတငျမကသေးဘူး။ ကိုယျဝနျဆောငျမမေတှေအေတှကျလညျး ဂြိုကျသိုးဆိုတာ အိပျမကျဆိုးတဈခုပါပဲ။ ဒီတော့ ဒီဆောငျးပါးလေးမှာ မမေတေို့ မသိမဖွဈ သိသငျ့တဲ့ ဂြိုကျသိုးရောဂါအကွောငျးလေး ဆှေးနှေးပေးထားပါတယျ။
ဂြိုကျသိုးဆိုတာ ကလေးတှမှော အဖွဈမြားတဲ့ ဗိုငျးရပျဈရောဂါပိုး အပြော့စားတဈမြိုးပါ။ ဖွဈပွီဆိုရငျ ကလေးမှာ အဖြားလေး တငှငှေ့ေ့ ၃၈°C လောကျ ဖြားလရှေိ့တယျ။
ဂြိုကျသိုးရဲ့ တခွားလက်ခဏာတှကေတော့ အနီရောငျ အစကျအစကျတှေ ပျေါလာတာ၊ အကြိတျတှေ ရောငျလာတာ၊ အအေးမိသလို ငှငှေ့လေ့ေးဖြား၊ ခေါငျးကိုကျပွီး နှာရညျ တောကျတောကျကတြာတှေ ဖွဈတတျတယျ။
ဂြိုကျသိုး ကူးစကျခံရခြိနျကနေ ရောဂါလက်ခဏာပျေါခြိနျထိဟာ ၂ ပတျကနေ ၃ ပတျလောကျထိ ရှိတတျပွီး အနီကှကျတှမေပျေါခငျ ၁ ပတျလောကျကနေ ပြောကျသှားပွီး အနညျးဆုံး ၄ ရကျလောကျအတှငျးမှာ ကိုယျ့ဆီကနေ သူမြားကို ကူးစကျနိုငျတယျ။
အကောငျးဆုံးကတော့ ကလေးတှကေို ကာကှယျဆေး ထိုးပေးထားလိုကျပေါ့။
>> ဘာကွောငျ့မြား ဂြိုကျသိုး ဖွဈရပါလိမျ့?
အခငျြးခငျြး ထိတှရေ့ာ၊ နှာခခြေောငျးဆိုးရာကနေ ကူးစကျတတျတဲ့ ဂြိုကျသိုးဗိုငျးရပျဈ rubella virus ကွောငျ့ ဖွဈတတျတယျ။ တဈခါပေါကျဖူးရငျ တဈသကျတာ ခုခံအား ရရှိသှားပါလိမျ့မယျ။
ဂြိုကျသိုး မဖွဈရအောငျ ကနျြးမာရေးဌာနက ထိုးပေးတဲ့ ဝကျသကျ၊ ဂြိုကျသိုး၊ ပါးခြိတျရောငျ ကာကှယျဆေး ထိုးပေးသငျ့တယျနျော။
အရငျက ဂြိုကျသိုး မဖွဈဖူး၊ ဂြိုကျသိုးကာကှယျဆေး မထိုးဖူးသူ ကိုယျဝနျဆောငျတဈယောကျမှာ ဂြိုကျသိုးပိုး ကူးစကျခံရခဲ့ရငျ ဒီဗိုငျးရပျဈပိုးဟာ မမှေးရသေးတဲ့ ဗိုကျထဲက ကလေးဆီကိုပါ ကူးစကျပြံ့နိုငျတယျ။
ဒီလိုကူးစကျသှားတဲ့အခါ ကလေးရဲ့ဖှံ့ဖွိုးမှုကို ဖကျြဆီးပွီးတော့ ကလေးမှာ မှေးရာပါ ဂြိုကျသိုးရောဂါစုလို့ချေါတဲ့ မှေးရာပါခြို့ယှငျးခကျြ အမြားအပွား ဖွဈလာပါလိမျ့မယျ။
ဒီလို ကလေးကို ကူးစကျနိုငျခွနေဲ့ ဖွဈလာနိုငျတဲ့ မှေးရာပါခြို့ယှငျးခကျြတှဟော ကူးစကျခံရခြိနျ အမရေဲ့ ကိုယျဝနျအနုအရငျ့ပျေါ မူတညျနတေယျ။ ကိုယျဝနျနုလလေေ ပိုဆိုးလလေပေါပဲ။
မှေးရာပါ ခြို့ယှငျးခကျြလို့ဆိုရာမှာ အကွားအာရုံနဲ့ အမွငျအာရုံ ခြို့ယှငျးခကျြတှေ၊ ဖှံ့ဖွိုးမှု နှောငျ့နှေးတာတှနေဲ့ တခွားပွဿနာတှေ ဖွဈလာနိုငျတယျ။
မိခငျမှာ ကိုယျဝနျဆောငျကာလ ပထမ ၁၀ ပတျအတှငျး ဂြိုကျသိုး ကူးစကျခံရရငျ ဗိုကျထဲက ကလေး ၁၀ ယောကျမှာ ၉ ယောကျလောကျမှာ မှေးရာပါ ဂြိုကျသိုးရောဂါစုဖွဈပွီး မှေးရာပါ ခြို့ယှငျးခကျြလေးတှေ ပါလာတတျပါတယျ။ ကိုယျဝနျအပတျ ၂၀ နောကျပိုငျးမှာကူးရငျတော့ မှေးရာပါ ဂြိုကျသိုးရောဂါစု ဖွဈနိုငျခွေ မရှိသလောကျကို နညျးသှားပါပွီ။